Nagarik Shukrabar - ‘म त नचाहँदा–नचाहँदै फेमस भएँ’
आइतबार, ०१ साउन २०७४, ०२ : २७ | अनिल यादव , Kathmandu
पहिलोपल्ट फिल्म खेल्दा त म घाइते नै थिएँ । घाइते अवस्थामै मैले ‘द घलेक’ भन्ने फिल्म खेलेँ । खासमा मेरो सानैदेखि केही न केहीमा इंगेज भइरहनुपर्ने स्वभाव हो । रमाइलो गरौँ, टिभी हेरौँ भन्ने लागेन । बच्चैदेखि क्रिएटिभ काममा इंगेज भइरहनुपर्ने । ८–९ वर्षको उमेरदेखि त्यसरी नै लागेको मान्छे अचानक १८ वर्षको पुग्दा घाइते भएँ । समय खाली भयो । त्यहीबेला फिल्मको अफर आयो । गुरुङहरुको संस्कृतिमा आधारित रहेकाले कथावस्तु पनि मनप¥यो । इंगेज पनि भइने, कथा पनि राम्रो । त्यसैले खेल्ने निर्णय गरेकी हुँ । तर स्क्रिन टेस्ट गरेर पास भएपछि मात्र खेलेकी हुँ है !
त्यो एउटा कारण हुनसक्छ किनभने समाचारतिर हेडलाइन नै भलिबल सुन्दरी भनेर आइरहेको हुन्थ्यो तर यही मात्रै कारणले होइन होला । मैले जति फिल्म खेलेँ, त्यो सबैको क्यारेक्टर मजस्तै छ । फिल्ममा लिनुअघि निर्देशकले आफ्नो कलाकार यत्तिको अग्लो, यत्तिको स्माइल भएको, यत्तिको लजा’को, यतिको हट्टाकट्टा हुनुप¥यो भनेर पोट्रे त गरेको हुन्छ नि ! हो त्यही क्यारेक्टरका लागि म फिट हुने भएकाले पनि मलाई लिइएको हुनसक्छ ।
हो । मेरो पहिलो प्राथमिकता त स्पोटर््स नै हो । मेरो हिरोइनका रुपमा पहिचान बनाउने लक्ष्य कति पनि होइन । खासमा मेरो लाइफ अहिलेसम्म सोचेअनुसार चलेकै छैन । आर्मीमा ज्वाइन गर्नु मन थियो मलाई तर त्यस्तो भएन । दुई वर्ष जति ट्राइ गरेँ पनि तर घाइते भएका कारण सकिनँ ।
तपाईंलाई स्पोटर्स फिल्म पनि खेल्न मन होला ?
क्राइटेरिया छैन भनौँ भने छ । पढेको हुनुपर्छ, मभन्दा अग्लो हुनुपर्छ । खेलप्रेमी पनि हुनुप¥यो । फिजिकल्ली कन्सस पनि हुनुप¥यो । म चाहिँ विहान उठेर जिम जाने ऊ चाहिँ सुतेको सुतै गर्नेखालको श्रीमान् भएर त भएन नि ! लाइफस्टाइल त मिल्नुपर्यो ।